तपाइलाई थाहा छ, धेरै खुसी वा दुःखी हुने मानसिक रोग वाइपोलार डिसअर्डर (भिडियो) « BBCeonlinenews
तपाइलाई थाहा छ, धेरै खुसी वा दुःखी हुने मानसिक रोग वाइपोलार डिसअर्डर (भिडियो)
पछिल्लो समय वाइपोलार डिसअर्डरको समस्या धेरैमा देखिएको छ । यो रोगका बिरामी विश्वमा नै बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालमा पनि यस्तो समस्याले धेरैलाई सताएको पाइन्छ । के हो वाइपोलर डिसअर्डर ? यो हुने कारण र बच्ने उपायबारे नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. प्रदीप पाण्डेसँग हाम्रोडक्टरन्युजले गरेको महत्वपूर्ण कुराकानी ।
यसका लक्षण भनेकै डिप्रेशन र मिनियाका लक्षण हुन् । जस्तै: मन धेरै चन्चल हुने,खुसी हुने । अति हिम्मत बढ्ने । खाने,बस्ने,सुत्ने कुराको मतलब नगर्ने । व्यावहारिकता भन्दा भावनामा रमाई आफुसंग भएका कुराहरु बाडेर वा अनावश्यक खर्च गरेर सक्ने । बढि रिसाउने । आफुले भनेको कुरा मात्र ठीक अरुले भनेको बेठीक मान्ने । धेरै दुखी हुने । एक्लो महशुस गर्ने । निराश हुने । आफुमा केही छैन भन्ने हीनभावना उत्पन्न हुने । संसारलाई नै शून्यता देखेर मर्न मन लाग्ने । कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने एकान्तमा बस्न मन पराउने लगायतका लक्षण देखन्छन् ।
यो रोगबाट बच्ने उपाय के के हुन् ? कतिपय मानिसले यो रोगलाई रोग कै रुपमा लिँदैनन् । तर यो कडा खालको मानसिक रोग हो । यसलाई सुरुवाती चरणमै परीक्षण गरेर औषधि सेवन गर्यो भने पूर्ण ठीक हुन्छ । तर यसलाई बेवास्ता गर्यो भने यसले गम्भीर असर गर्दछ । माथिका कुनै पनि लक्षण देखियो भने तुरुन्त अस्पताल जाने । चिकित्सकले भने बमोजिम खानपान र औषधि सेवन गर्ने । धुम्रपान मद्यपान नगर्ने, अनिदो नबस्ने लगाएतका कुरामा सावधानी अपनायो भने यो रोगबाट बच्नुका साथै पूर्ण स्वस्थ जीवन जीउन सकिन्छ । यो समाचार स्वदेश नेपालमा छ,